Obodo ndị mara mma nke Burgundy, France | Akụkọ Njem
Obodo ndị mara mma nke Burgundy, na France
Mariela Carril | | Getaways Europe, Francia, General
Na mba niile dị na Europe, e nwere obodo na obodo nta ndị zoro ezo ruo taa ma bụrụ ọmarịcha ebe.
Dị ka ihe atụ, France na-etinye uche ebe mara mma n'ezie n'ókèala a maara dị ka Burgundy ma ọ bụ Bourgogne, na French. Oge ọkọchị bụ ezigbo oge iji gafere akụkụ nke obodo a ka m hapụ gị nhọrọ dị nkenke obodo kachasị mma na Burgundy.
4 Flavigny-sur-Ozerain na-agabiga
6 Nke Abụọ.
Ọ bụ mpaghara akụkọ ihe mere eme nke dị na Central ọwụwa anyanwụ France ma taa ọ nwere ngalaba anọ: Gold Coast, Saône-et-Loire, Nièvre na Yonne.
N'oge gara aga, ala ndị France bụ ndị agbụrụ Celtic bibiri na oge ndị Rom tinyekwara n'Alaeze. Na narị afọ nke anọ, mgbe oge ebube Rome gasịrị, ndị Burgundians pụtara, agbụrụ German sitere na Oké Osimiri Baltic.
Ndị Burgundians biri na ọdịda anyanwụ Alps ma ndị Frank mechara merie ha. Ha bụ oge nke Alaeze Burgoña na njedebe na ala ndị a ghọrọ ducats.
N'oge ochie Burgundy jupụtara na ebe obibi ndị mọnk mara mma ma dị mkpa ma ọ bụ ọnọdụ nke ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa na esemokwu na akụkọ ntolite nke ala-eze France. Ọ bụ ya mere ịgagharị n'ala ndị a nwere ihu igwe dị mma nke oke osimiri ji bụrụ njem site n'akụkọ ihe mere eme.
Oh, na maka gastronomy kwa. Ka emechara, ọ bụ ebe omumu nke French Burgundy.
Obodo ochie a bụ ịma mma wuru n’elu ugwu dị elu. Lelee Burgundy Canal ọ dị ka ihe sitere na akụkọ ifo Brothers Grimm. Ọ nwere a nnukwu ụlọ wuru n'oge ahụ site na Duke Philippe-le-Bon, ka ọ dị ugbu a, ọ nwere mkpọmkpọ ebe ma enwere ụlọ ụka Gothic site na narị afọ XNUMX.
N'afọ gara aga, naanị maka oge ọkọchị na mgbe ọtụtụ ọrụ gachara, emepere ebe ọhụụ ọhụrụ na nnukwu ụlọ nke mepere emepe n'afọ niile ewezuga ụfọdụ ụbọchị obodo ma ọ bụ nke okpukperechi yana awa ole na ole na Mọnde na etiti ehihie.
Gburugburu na n'okpuru, n'okporo ámá obodo ahụ, enwere ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na mmụọ mgbe ochie na-agaghị echefu echefu.
Ọtụtụ na-eche na ọ bụ obodo kacha mma ochie na Burgundy. O nwekwara ulo obula, nke di n’elu uzo, ya na uzo okwute ji gi banye uka.
Ahịa obodo ahụ malitere na narị afọ nke XNUMX ma kpuchie ya ma ọ bụrụ na ị gaa n'oge okpomọkụ, ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ okooko osisi dị na windo ọ bụla nke ụlọ ọ bụla n'ime obodo.
Ihe ngosi panorama kacha mma sitere na elu ugwu ebe ị ga-ahụ ụlọ ụka ahụ, Chapelle-sous-Brancion, obere ụka mara mma nke narị afọ nke XNUMX nke Romanesque nke ubi gbara gburugburu.
Ọ bụ obodo mara mma medieval nke zoro na nkume okwute ma nke bụbu ezigbo obodo ewusiri ike n'oge ochie. Ejiri ihe okwute mee ihe niile ma buru kwa ebe echekwara nke oma n’ihi na ndi bi n’ime ya ji ya kpọrọ ihe.
You hụrụ ihe nkiri Juliet Binoche, Chocolate (ya na nwa ya nwanyị rutere n'otu obodo ma meghee ụlọ ahịa chocolate, na-emejọ onye isi obodo)? Ọfọn, a gbara ya ebe a.
Taa enwere ọtụtụ veranda nka ma ọ bụrụ na ịchọrọ anise enwere otu ụlọ ọrụ anise bọọlụ na Abbaye de Flavigny, Benedictine abbey nke narị afọ nke asatọ edebela usoro ochie a kemgbe ahụ.
Obodo ochie Burgundian dịkwa n'ugwu, na-ele Ndagwurugwu Serein anya. Ọ bụ ihe atụ doro anya nke obodo e wusiri ike nke mpaghara a ka ọ na-agbanye na arch a maara dị ka Porte d'en Bas.
A bouquet nke n'okporo ámá, ụlọ ndị mgbe ochie, mgbidi, turrets, ala dungeons, steepụ steepụ ebe na ebe, obere ogige ndị zoro ezo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi mmiri iri abụọ na-enye mmiri. Ojuju.
Ka ị na-arịgo, ị na-abanyekwu na Montréal ma gafere n'ọnụ ụzọ nke abụọ, Porte d'en Haut, n'azụ nke enwere ụlọ ụka na ebe a na-eli ozu na echiche nke na-enye gị ohere ilele ndagwurugwu na ọmarịcha osimiri Serein. Ọ bụ ebe a ka nnukwu ụlọ nke 1599 wuru site na knight nke
Castlọ a toro karịa Notre Dame de Paris na n'ime ya nwere ihe osise atọ, nke nwere ụkpụrụ Akwụkwọ Nsọ na nke osisi, nke Eze Francis nke Mbụ nke France nyere Duke nke Burgundy.
Montereal bụ ebe dị jụụ nke ọtụtụ ndị Parisi na-eleta ọ bụ ezie n’oge ọkọchị, ụbọchị Wenezde ọ bụla, enwere ahịa mara mma, emume ndị omenkà na egwu egwu. Ọ bụrụ n’ikpebie ịga nso ị nwere ike ịga leta Vézelay, Avallon, the Grottos d’Arcy ma ọ bụ Castle Ancy-le-Franc.
Obodo ọzọ e wusiri ike nwere ụlọ ochie na elu ụlọ ya na osisi mechiri emechi. Ogwe ya, n'okporo ámá ya na arcades ya malite na narị afọ nke XNUMX ruo nke XNUMX ma chọọ chọọchị na ụlọ ụka dị iche iche chọọ ya mma.
Ọ bụ obodo na-abịa ndụ site na Eprel mgbe ndị ọbịa mbụ rutere ma ụlọ oriri na ọ cafụ andụ na ụlọ ahịa na-emeghe anyanwụ. Enwekwara otutu obodo ndi omenkà raara onwe ha nye ihe osise na igba ogwu ha, akpa aka na ulo akwukwo.
Ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ ala, ị nwere ike isi na Marcigny gbagoo iji nwee ekele, ka ị na-abịarukwu nso, ịma mma nke obodo ochie ochie na ebe dị elu.
Obodo na-adịkwaghị ndị nnukwu ụlọ t. Hugues, site na narị afọ nke 1 wee bụrụ nke kacha ochie na mpaghara. A mụrụ ebe a Abbot dị mkpa nke ebe obibi ndị mọnk nke Cluny, Hugues de Semur. Nnukwu ụlọ ahụ ga-emepe n’etiti March 15 na November XNUMX ma nwee ọtụtụ ebe ị ga-eleta n’ime obodo na gburugburu.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke kachasị mara mma burgundy mana n'ezie ha abụghị naanị obodo ma ọ bụ obodo ịga leta: Dijon, onye bụbu isi obodo nke duchy, bụ obodo dị egwu ma Beaune ka mara mma yana ụlọ akụkọ ihe mere eme ya na n'okporo ámá cobblestone.
E nwekwara Cluny ya na ọgaranya ya na akụ ike ya jupụtara na French Revolution.
-pute guedelon nnukwu ụlọ-
Anyị nwere ike ịgbakwunye Chhateteau de Guedelon, 1997lọ nke XNUMX nke ndị akụkọ ihe mere eme wuru ebe ị nwedịrị ike iji ejiji n'oge ejiji ma kpọọ ntakịrị, na nnukwu ụlọ abụọ, Ancy-le-Franc na Tanlay.
Y Agaghị m ahapụ Autun dịka ọ bụ site n'aka Emperor Emperor bụ Augustus ma ọ ka nwere akụ sitere n'oge ahụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ gaghị ekwe omume inyocha ihe niile yabụ ndụmọdụ m bụ ịgbazite ụgbọ ala, ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem, ma rara onwe gị nye na ịme ndepụta nke ihe ị na-achọghị ịhapụ, na-ahapụ mgbe niile ụzọ mepere iji chọpụta ebe ọhụụ.
Will gaghị akwa ụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Obodo ndị mara mma nke Burgundy, na France
N'afọ na-abịa Achọrọ m ịga njem nke ndị a magburu onwe ha, ochie obodo.
Obodo 5 dị ọnụ ala karịa na United States
Choputa Ibiza gafere oriri na nkwari